The Irrawaddy's Blog: ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ Rohingyar Crisis
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ Rohingyar Crisis
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အကြပ်အတည်း နှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းအရာ အခြေအနေများ အပေါ် ကိုယ်ပိုင် အမြင် နဲ့ အကြံပြုချက်များ (Personal Views and Recommendations on Rohingyar Crisis and Other Related Matters by Nyein Chan Aye) နောက်ခံ အခြေအနေ (Background)
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်တော့ ဒီ စာဖတ်ဖြစ်သူအားလုံး မျက်ခုံးတွေ ပင့်သွားကြမယ် ထင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေကို ပထမဦးဆုံး သိစေချင်တာကတော့ စာရေးသူဟာ အရင် စစ်အစိုးရ ခေတ် ကတည်းက ဒီလို အွန်လိုင်းမှာ မိမိ အမြင်တွေ တင်ပြ ဖလှယ်လေ့ရှိပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ရှေ့တန်းတင် ဦးတိုက်ပြီး ပြောလေ့ မရှိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတာပါ။
အကြောင်းက စစ်အစိုးရခေတ်တလျှောက်လုံးမှာ လူများစု မြန်မာ အပါအဝင် အခြား လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ၊ လူမျိုးကွဲ/ဘာသာခြား နိုင်ငံသားအားလုံးဟာ ဖိနှိမှု၊ မတရားမှုတွေရဲ့ ဒဏ်ကို စစ်ဖိနပ် အောက် မှာ ပြားပြားဝပ် အားလုံး တန်းတူ ခံစားနေရလို့ အုပ်စု တစုကို အခြေပြုတဲ့ ဘယ်သူ့ အကြောင်းမှ သီးသန့် အလေးထား ပြောဖို့မလို၊ စနစ်ဆိုးအကြောင်းသာ ထောက်ပြဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လူမျိုးကွဲ/ဘာသာခြား တွေ ဟာ နယ်စပ်ဒေသတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ နယ်မြေတွေ မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ပို ခံကောင်း ခံ ရတယ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် တုံးအောက်က ဖားချင်း အတူတူချည်းပဲလို့ ယူဆတဲ့ အတွက် ယေဘုယျ သဘောဆောင်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုပဲ အရင်တုန်းက ပြောလေ့ ဆွေးနွေးလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခု ခေတ်စနစ် ပြောင်းပြီလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့လည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို စပြောဖို့ ဆိုဖို့ စိတ်ကူး မရှိခဲ့ပါ။ အကြောင်းက စာရေးသူ တဦးတည်း သဘော နိုင်ငံရေး ခံယူချက် အမြင် အရ အခြေခံ ကျ ကျ ခေတ်ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ မယုံကြည်လို့ရယ်၊ အပေါ်ယံ ခေတ်ပြောင်းပြီ ဆိုစေအုံး.. စနစ်ဆိုး၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ ပြောင်းဖို့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အပါအဝင် လူတန်းစား အသီးသီး နဲ့ သာမန် ပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆဟောင်းတွေ ပြောင်းဖို့က အချိန်ယူရအုံးမယ်ဆိုတာ နားလည်လို့ရယ်၊ တကယ်လို့ ခု စ ပြောစရာရှိရင် ရိုဟင်ဂျာတွေ နည်းတူ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ နဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း မှာ နိုင်ငံမဲ့ ဒုက္ခသည် အနေနဲ့ ရောက်နေတဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စ ဖြေရှင်းဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်းသာ အရင်ပြော ဖို့လိုပြီး သူတို့တတွေ အများစု သူတို့ မြေပြန်နင်းခွင့်ရပြီးမှ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ပြောသင့်၊ ဖြေရှင်းသင့်၊ ပြောနိုင်၊ ဖြေ ရှင်းနိုင် မယ်လို့ စာရေးသူတဦးတည်း အမြင်အရ ယူဆလို့ရယ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေထဲက နောက်ဆုံးအချက်ကို ဖတ်ရတော့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ နဲ့ သူတို့ကို စာနသူ၊ ထောက် ခံသူတွေက ဒီစာရေးသူက ဘက်လိုက်တယ်လို့လည်း မမြင်စေချင်ပါ။ သမိုင်း ဖြစ်စဉ် နဲ့ လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေအရ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ က ဖြေရှင်းဖို့ ပို သိမ်မွေ့ ခက်ခဲလို့ ဒီလို ယူဆခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
[စကားချပ် - အဲဒီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ဖြစ်ခါစမှာ အကြောင်း/အကျိုး ရှာတဲ့ စာရေးသူရဲ့ အမြင်ကို “ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆင်ခြင်စရာ”၊ မိုးမခ (ညွှန်း-၁) ဆိုပြီ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။]
နောက်တခုက မိမိ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ သိုသိုဝှက်ဝှက် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းတဲ့ စရိုက် အရိုးစွဲနေမှုသဘောက ချဲ့ကား လုပ်ကြံ ပြောဆိုခံရမှုတွေ နဲ့ အတူ အကျိုးဆက် ရင်ဆိုင်ရလာနိုင်တဲ့ (ခုအချိန်မှာ ခြိမ်းခြောက်မှု အနေနဲ့က စရှိနေပါပြီ) အကြမ်းဖက်ခံရမှု အခြေအနေက နိုင်ငံ ရဲ့ တိုးတက် စည်ပင်သာယာဝပြောရေး နဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံး ရဲ့ လုံခြုံရေးကို တကယ် ထိခိုက်နိုင်မယ့် အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတာဝန် ယူပေးရတဲ့ သူတွေမှာ ခေတ်မီ ကောင်း မွန် ပြည့်စုံတဲ့ စနစ်၊ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးမှု အားနည်းခြင်း နဲ့ အတူ ဘယ်အရာမဆို ပြီးပြီးရော အလွယ် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟောင်း မပျောက်သေးတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ ဒီလို အနေအထားဟာ ခြိမ်းခြောက်မှု သက်သက်ဆိုစေအုံးတော့. အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်၊ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်တွေ အတွက် တကယ်ပဲ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကမှ တကယ် ခု တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ရှုမြင် သုံးနှုံးနေတဲ့ အမျိုးသား လုံခြုံရေး (National Security) ပြဿနာ အစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံအနေအထားတွေကြောင့် စာရေးသူလည်း ဘယ်လို အသံမျိုး၊ လွှမ်းမိုးအရာရောက်မှုမျိုး မှ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်စွမ်း သူ မဟုတ်တဲ့ သာမန်လေ့လာသူ လူငယ် တယောက်ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ နဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဝင်ရောက် ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။
နောက်အကြောင်းတခုက ဆိုခဲ့သလို ဒီပြဿနာကို တခါမှ ဆောင်းပါးရှည် အနေနဲ့ အကျယ်တဝင့် မပြောခဲ့ ဖူးဘူးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ဒီ ရခိုင် မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်စဉ် အစကို သုံးသပ်ခဲ့တဲ့ “ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် ဆင်ခြင်စရာ” ဆောင်းပါး နောက်မှာ စာရေးသူရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အမြင် ကို ကိုယ်ပိုင် လူမှုကွယ်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာတို အနေနဲ့ တခါ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရေးခဲ့တဲ့ စာတိုပါ သဘော နဲ့ အခု ဆောင်းပါးမှာ ရေးမယ့် အချက် တွေဟာ အတူတူ ပါပဲ။ အဲဒီတုန်း က ရေးခဲ့တဲ့ စာတို ပါ သဘော ထား အတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို အမှန်အတိုင်း အသုံးချပြီး လက်ရှိ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေထဲက နိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်သူတွေကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးပြီး ဖြေရှင်းမှ ဒီပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို လက်ခံ နားလည်မှု ရှိလာတဲ့ သဘော လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ အကြီးအကဲ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကိုယ်တိုင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတဲ့ အခု အချိန်မှာ ဒီအကြောင်းရဲ့ နောက်ခံ အခြေအနေကို နည်းနည်း အသေး စိတ် ဆွေးနွေးတဲ့ ဆောင်းပါး ပုံစံ အသစ် ရေးလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရူပါ။
နိုင်ငံရေး သဘော မဆောင်ဘဲ ဘာသာဗေဒ သဘောအရ ဒီဝေါဟာရ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ကို ရခိုင်/ မြန်မာ - ရိုဟင်ဂျာ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးလည်း လက်ခံနိုင်မယ့် ရှေးကွင်းဆက် ပြောရမယ်ဆိုရင် (၁၈) ရာစု နှောင်းပိုင်း (၁၇၉၉) ခုနှစ်မှာ အခု အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသ ပတ်ဝန်ကျင် ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယ မှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး စစ်တကောင်း ဒေသ နဲ့ ရခိုင် ဒေသတွေကို သွားလာလေ့လာခဲ့တဲ့ အဲ့ခေတ်က ခေတ်ပြိုင် ပုဂ္ဂိုလ် လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ စကော့လူမျိုး ဆရာဝန် Dr. Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829) ရေးသားခဲ့တဲ့ “မြန်မာ (ဗမာ) လက်နက် အင်ပါယာ နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ ဘာသာစကား အပြော တချို့ရဲ့ ဝေါဟာရ အသုံးများ နှိုင်းယှဉ်လေ့ လာချက်“ ဆောင်းပါးမှာ ရခိုင်ဒေသ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မဟာမေဒင် ဘာသာ ကိုးကွယ် တဲ့ ရိုအင်ဂျာ (Rooinga) လူမျိုးတွေရဲ့ စကားကိုလည်း ဒေသသုံး စကား (Dialect) အနေ နဲ့ ထည့်သွင်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ အချက်ကိုလည်း ယနေ့ခေတ်ပြိုင် ပြင်သစ် လူမျိုး ရခိုင် သမိုင်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် Dr. Jacques P. Leider က ဘာသာဗေဒ သဘောအရ ခု တွေ့ရှိ့ရသေးသမျှ ထဲက အစောဆုံး တွေ့ရှိချက် လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ သူဟာ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို ဌာနေတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးလို့ သူ့အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ထားသူ တယောက်ဆိုတာလည်း သတိပြုပါ။
ဘာသာဗေဒ စကားလုံး ဝေါဟာရ တွေ ရဲ့ ရင်းမြစ် နဲ့ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု (Etymology) သဘော အရ (၁၈) ရာစု ထက် ရှေးကျတယ် ဆိုတဲ့ အခြား ကောက်ချက် ဆွဲ သူ ပညာရှင် တွေရဲ့ အမြင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူဟာ ဒီစာကို အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ရေးတာမဟုတ်ဘဲ ဘက်နှစ်ဘက် စလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကိုပဲ ဆိုချင်တဲ့ အတွက် အကျယ်ထည့်မရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံ အခြေအနေ မှာ စာရေးသူ အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ စကားလုံး ပေါ်ခဲ့တယ်၊ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ခဲ့တယ်/မခေါ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ မငြင်းဘဲ လူမျိုးတွေရဲ့ မွေးရာပါ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် အဘောအရ သူတို့ လူမျိုးတွေ အများစု ကျေနပ်လို့ သူတို့ဘာသာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်းကို လက်ခံပါတယ်။ အများကလည်း သူတို့ကို ညွှန်းဆိုရင် သူတို့ခေါ်စေဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နာမည် အတိုင်းပဲ အသုံးပြုရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အခြား လူမျိုး တမျိုးမျိုးရဲ့ နာမည် နဲ့ မတူတဲ့ အခြား သူတို့ ကြိုက်တဲ့ နာမည် အသစ် တခုခုကို သူတို့ လူမျိုး ဆန္ဒအရ ခုမှ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရသေးတယ် လို့ ယူဆပါတယ်။
ဗမာနိုင်ငံသမိုင်းကို အခြေခံ အဆင့် လေ့လာဖူးသူဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ အပြည့်အဝ နိုင်ငံသားတွေ အဆင့်သာမက ဌာနေ တိုင်းရင်းသားပါ အသတ်မှတ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတယ်ကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး အထောက်အထားပြရရင် စာပေဗိမာန် ၁၉၆၄ ပဌမအကြိမ်ထုတ် မြန်မာ့ စွဲစုံကျမ်း အတွဲ (၉)၊ အပိုင်း (က)၊ စာမျက်နှာ (၈၉) ပါ “မေယုနယ်ခြားခရိုင်” ခေါင်းစဉ် အောက်က ရခိုင်ပြည်နယ် မယူတောင်တန်းကို ဗဟိုပြုတဲ့ မယူမြစ် နဲ့ နတ်မြစ်ကြား ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များမှာ နေထိုင်တဲ့ လူအများစု (၇၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ နဲ့ အခြား ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမွီး တိုင်းရင်းသားတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံသမိုင်း နဲ့ အခြေအနေ မှာ ဗမာ့သမိုင်းကို အခြေခံထက်ပို လေ့လာဖူးတယ် တယ်လို့ ဆိုချင်ရင် ရတဲ့ စာရေးသူ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား တွေပါလို ဘယ်တုန်းကမှ မဆိုခဲ့၊ မမြင်ခဲ့၊ မပြောခဲ့သလို အခုဆောင်းပါ အပါအဝင် နောင်လည်း.. ပြောမှာ ရေးမှာ မဟုတ်ပါ။
အကြောင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရမှု ဖြစ်စဉ် နဲ့ အကြောင်း သဘောကို လက်မခံလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ် ရောက်မှ နိုင်ငံရေး လိုအပ်ချက် သဘောအရ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အခြား တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု တချို့ကိုလည်း အလုံးစုံ သဘော အနေနဲ့ လက်ခံလို့ မရပါ။ ငြင်း လည်း မငြင်းပါ။
သူတို့ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် စာရေးသူ အနေနဲ့ မပြောဘူး/ မငြင်းဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့် ဆိုတာ ကို နောက်အကြောင်းတခုပြရရင်…
လူတွေဟာ သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်တွေမှာ ကမ္ဘာ အနှံ့ ဆိုသလို ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာဖွေရင်းနဲ့ လှည့်လည်၊ သွားလာလေ့ရှိပြီး သင့်လျော်ရာ နေရာ၊ ဒေသ နဲ့ ဥတု မှာ သင့်လျော်သလို နေထိုင် အခြေချ လေ့ရှိကြပါတယ်။ လူမျိုးစု တစုကို လက်ရှိ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံရယ်လို့ ခေါ်ဆို သတ်မှတ်ကြတဲ့ နေရာတနေရာအတွက် ဌာနေ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် သတ်မှတ်ရာမှာ အခြား သိပ္ပံနည်းကျ ဘာသာဗေဒ၊ မနုဿဗေဒ စတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုံးသပ် ကောက်ချက်ဆွဲမှု များနဲ့ အတူ အဓိက က သမိုင်း ဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်း အနေနဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံတည်ရှိတဲ့ နေရာဒေသ၊ နယ်နမိတ်အတွင်းကို သမိုင်းမတင်မီ (သို့) သမိုင်းတင်စ အခြေအနေက စလို့ နောက်ပိုင်း ဘယ်အချိန် အစောဆုံး အဲ့လူမျိုးစု အများစု ဝင်ရောက် အခြေချ နေထိုင်ကြ (Mass Migration/Settlement) သလဲဆိုတာကို ကြည့်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာ အပါအဝင် အခြား လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ လူအများစု နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံထားတဲ့ လူမျိုးစုတွေ လည်း ဒီလို လှည့်လည်သွားလာ နေထိုင်ခဲ့ကြရင်းနဲ့ပဲ ဗမာ့ သမိုင်းမတင်မီ နဲ့ တင်ပြီးစ ခေတ်တွေမှာ လက်ရှိ ဗမာ နိုင်ငံလို့ ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်တဲ့ ဧရိယာ အတွင်းကို ဝင်ရောက် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။
ဒီလို စတင် အခြေချနေထိုင်တဲ့ အချိန် သတ်မှတ်ကြရမှာလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ မြေထဲသမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေအရ ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ် အတိအကျ ပြောဆိုနိုင်မှု အားနည်းပြီး အမျိုးမျိုးယူဆနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို သဘောအတိုင်းပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်အချိန်တုန်းကတည်းက ခုလက်ရှိ သူတို့နေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင် နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားဒေသမှာ လာရောက် အခြေချနေကြသလဲ ဆိုတာဟာ လည်း သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်အနေနဲ့ ဘက်နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အခြေ အနေ ဖြစ်နေ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အလုပ်ကို စာရေးသူ အမြင် တခုတည်းနဲ့ သုံးသပ်လို့ မရသလို အခြား ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဦး၊ ပညာရှင် တယောက် ယောက်၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း တခုခု နဲ့ အစိုးရ အပါအဝင် တဦးချင်း၊ တဖွဲ့ချင်း သဘော ဘယ်သူမှလည်း လုပ်ဆောင်၊ ပြောဆို၊ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါ။
နောက်ဆုံးမှာ ဥပဒေပြု လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရက ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဖြစ်မှု ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးရမှာ မှန်ပေမယ့် ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချနိုင်ဖို့က ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက လက်ခံနိုင်တဲ့ လွတ်လပ် ဘက်မလိုက်တဲ့ ဘာသာဗေဒ၊ မနုဿဗေဒ၊ သမိုင်း၊ ရှေးဟောင်း မြေထဲသမိုင်း ပညာရှင် စတဲ့ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ အမြင်တခုတည်း အပေါ်သာ အခြေခံတဲ့ ပညာရှင်တွေ စုစည်းထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လေ့လာစုံစမ်းရေး အဖွဲ့က သုံးသပ်လေ့လာပြီး အကြံပြုချက် တရပ်ကို လူထု နဲ့ အစိုးရထံကို တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရှင်တွေရဲ့ အဂတိ ကင်းတဲ့ သုံးသပ်ချက် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် လိုအပ်ရင် အများစု လူထု သဘောထား ဆန္ဒခံကာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စ ဗမာပြည် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရခေတ်၊ နောက် ပိုင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ နဲ့ မဆလ ခေတ်ဦးပိုင်းတွေမှာ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ တိုင်းရင်းသား
ဖြစ်မှု နဲ့ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရခေတ်မှာ အသိမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ တခြား တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ကို စာရေးသူ လက်မခံဘူး၊ သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေပါလို့ ခုလည်း မပြောဘူး၊ ငြင်းလည်း မငြင်းဘူးဆိုတာက ခု စာရေးသူ တင်ပြခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သဘော၊ အလုပ် နဲ့ ဖြစ်စဉ် အဲဒီ အချိန်တုန်းက အားနည်းခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ အနေအထားမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ်ကို လက်ရှိ အချိန်မှာ အငြင်းမပွားကြဖို့ ရခိုင်၊ မြန်မာ၊ ရိုဟင်ဂျာ ပညာရှင် နဲ့ သာမန် လူထု ကို စာရေးသူအနေနဲ့ အကြံပြု တောင်း ဆို ချင်ပါတယ်။
ဒီလိုအငြင်းပွားမှု ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်သလဲဆိုတာက စာရေးသူ တဦးတည်း ဘာကြောင့် မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ အငြင်းမပွားနိုင်၊ အငြင်းပွားခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိလို့ပါလို့ အကြောင်းပြ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သဘောတရား အတိုင်းပဲ ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကို တဘက်သတ် ဥပဒေ အရ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ချက်ကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ တဘက်က အရင်ကတည်းက ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတွေပါ ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ဇောင်းပေးပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးလိုတဲ့ အဝေးရောက် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရှင် ဆိုသူများနဲ့ ပြန်လည် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေတဲ့ ရခိုင်၊ မြန်မာ ပညာရှင် များကို စာရေးသူ အနေနဲ့ အနူးအညွတ် မေတ္တာ ရပ်ခံ အသိကပ်စေလိုတာကတော့ ဒီလို တိုင်းရင်းသာ ဟုတ်/မဟုတ် အခုအချိန်မှာ အငြင်းပွားနေလို့ ပြဿနာ က ပြီးမှာ မဟုတ်တဲ့ အပြင် ငြင်းနေ တုန်းကာလမှာပဲ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ပုံစံတွေ ထပ်ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးရမှာက အခု စာရေးနေသူ စာရေးသူ၊ အခု စာဖတ်နေသူ အများစု အပါအဝင် အငြင်းပွားနေသူ ပညာ ရှင်များမဟုတ်ဘဲ တကယ် ပဋိပက္ခ ဒေသမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင် နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြည်သူလူထုတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို သုံးသပ်ရင် မူရင်း ဗမာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် မေယုနယ်ခြားဒေသမှာ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ နေထိုင်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ နဲ့ ခု လူအများ ပြောဆိုနေကြတဲ့ နောက်ပိုင်း ခိုးဝင်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေ ကို ခွဲခြား မြင်နိုင်ရပါမယ်။ စာရေးသူ အနေနဲ့ ခုလတ်တလော၊ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော်အတွင်းမှာ အဲဒေသကို တရားမဝင် ခိုးဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို မငြင်းပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အနည်းစု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ အကြောင်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား လက်မှတ်ကိုင်ထားသူ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေဟာ အစစအရာရာ ဖိနှိပ်မှု ပြင်းထန်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး နည်းပါ၊ လုပ်ခ လစာနည်း၊ ပိုက်ဆံတန်ဖိုး မရှိ တဲ့ ဒီဘက်ကို လာရောက် အခြေချစရာ အကြောင်းမရှိလို့ပါ။
လက်လုပ်လက်စားထဲက ဒီဘက်မှာ အလုပ်အကိုင် လာလုပ်တာ အနည်းစု ရှိကောင်း ရှိပါမယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် နိုင်ငံသား အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ မိမိတို့ နိုင်ငံဘက် ကူးလာပြီး နှစ်ပြား၊ တပဲ ရမယ့် အလုပ်မျိုးတွေထက် သူတို့ အစိုးရ က ကိုယ်တိုင်က ဦးစီးပြီး စနစ်တကျနဲ့ နိုင်ငံတကာကို တရားဝင် အလုပ်ကြမ်း အလုပ်သမား တင်ပို့ပြီး နိုင်ငံခြား ဝင်ငွေ ရှာနေတဲ့ အစီအစဉ်အရ အခြား ချမ်းသာတဲ့ စင်္ကာပူလို၊ သူတို့နဲ့ ဘာသာချင်း တူတဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေလိုမှာ သွားလုပ် ဒေါ်လာရှာနေကြတာက အများစု ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ထဲက အလယ်အလတ်တန်းစား၊ ငွေကြေးလည်း ထုတ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား တချို့ ဒီဘက်လာ အာဏာပိုင်တွေကို လာဘ်ထိုး၊ ဝင် စီးပွားလုပ်၊ ဟိုဘက်ဒီဘက် တရားမဝင် ကူးချည် သန်းချည် လုပ်နေတာတွေ ရှိမှာပါ။ ဒါဟာ မူရင်း အဲ့ဒေသမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါ။
အာဏာပိုင် တွေရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကြောင့် ဒီလို တဘက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက စီးပွားရေးသမားတွေ မိမိနိုင်ငံတွင်းကို တရားမဝင် ဝင်ရောက် စီးပွားလာရှာခွင့်ရနေတဲ့ ပြဿနာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော် အတွင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် တခုတည်းမှပဲ ရှိနေတာမဟုတ်ပါ။
ဗမာပြည်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နယ်စပ်မြို့တွေတိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဘင်္ဂါလီတွေလိုပဲ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ တရုတ် အလယ်အလတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ တရားမဝင် မှောင်ခို ပစ္စည်း တင်သွင်းသူတွေ၊ မူးရစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသူတွေဟာ ဒီလို ဒေသ ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့် ကို လာဘ်ထိုးတဲ့ နည်းနဲ့ပဲ ဝင်ထွက်သွားလာ လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ အများစုဟာ အခြေချနေထိုင်သူတွေ မဟုတ်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော် အတွင်း တိုင်းပြည်မှာ တကယ် လာရောက် အခြေချ နေထိုင်သူတွေက နယ်စပ်တွေကနေ ဝင်လာတဲ့ မှတ်ပုံတင် အသစ်ကျပ်ချွတ် သုံးလေးခု ကိုင်၊ ငွေမည်းတွေကို ကားနောက်ခန်းမှာ ဂုန်နီအိပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ထည့်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ မြို့ကြီးတိုင်းမှာ ဝင်ရောက်နေရာယူခွင့် ရနေသူ တရုတ် သူဌေး အကြီးစားတွေပါ။ ရိုဟင်ဂျာ ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်မှု ပြဿနာ၊ အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့သာ အဓိက ကြည့်သင့်တယ်လို့ ယူဆနေသူများကိုလည်း ဒီလိုကိစ္စတွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဟို ယခင် နဲ့ လက်ရှိ ဗမာပြည်မှာ တရားမဝင် မှတ်ပုံတင်အတု (သို့) သက်တမ်းကုန်/တရားမဝင်တော့ တဲ့ နိုင်ငံသား ကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ပြီး ဗမာပြည်မှာ နေထိုင် သွားလာ နေကြတာ နိုင်ငံခြားသား ချည်းပဲလည်း မဟုတ်ပါ။ တခြား နိုင်ငံ တခုခု (ဥပမာ စင်္ကာပူ၊ အမေရိကန်၊ ထိုင်ဝမ်) မှာ နိုင်ငံသား ခံယူပြီး မြန်မာလူမျိုး အစစ် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဖွား လူမျိုးစုံ နိုင်ငံသားဟောင်းတွေလည်း ပါ ပါတယ်။
သူတို့ထဲက အများစုဟာ ဗမာပြည် ပြန်လာလည်ရင် နိုင်ငံခြားသား ပတ်ပို့စ် နဲ့ ဝင်ကောင်း ဝင်ခဲ့ပေမယ့် ဗမာပြည်မှာ နေထိုင်သွားလာနေစဉ် တလျှောက် ဗမာနိုင်ငံသားကဒ် ပြား ကိုင်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ခံယူနေကြတာတွေရှိပါတယ်။ တချို့ဆို ဗမာပတ်ပို့စ်ကို အရှင်ထားပြီး ပြန်အဝင် လေဆိပ်မှာကတည်းကကို ဗမာပတ်ပို့စ် နဲ့ ဝင် ဗမာပြည် မှာ တရားမဝင် နိုင်ငံသားနှစ်မျိုး (Illegal Dual Citizenship) ခံယူပြီး နှစ်ရှည်လ များ ပြန်လာနေထိုင် စီးပွားလုပ်နေကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာ က ရိုဟင်ဂျာ တခုတည်း (သို့) ဘင်္ဂါလီ တခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အားလုံး ဖြန့်ကျက် စဉ်းစားပြီး ဗမာပြည်က အစိုးရ ရုံးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ စည်းစနစ်မကျမှု၊ အကျင့်ပျက်မှု ပုံစံမျိုးကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား အစိုးရ ကို ပြုပြင် ဖို့ တောင်း ဆိုရမယ် ဆိုတာကိုပါ။
နယ်စပ်ဒေသမဟုတ်တဲ့ အတွင်းပိုင်းက မြို့ကြီးတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ အစဉ်အဆက်က နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးကွဲ (တရုတ်/အိန္ဒိယ)၊ ဘာသာခြားတွေလည်း မှတ်ပုံတင်လို၊ သန်းခေါင်စာရင်းလို အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲ၊ ဘယ်လောက် ငွေကုန်ကြေးကျများ၊ စိတ်ပန်း၊ လူပန်း ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေထဲမှာ အဲ့လူ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာခြားတွေ ရှိတဲ့သူဆိုရင် နားလည် ခံစားသိနိုင်မှာပါ။ စာရေးသူ သိတဲ့ ရန်ကုန် တရုတ်တန်းမှာ ဘိုးဘွား၊ မိဘ က အစ မွေးတဲ့ တရုတ်သူငယ်ချင်းတွေဆို အစိုးရ က ထံက ရထားတဲ့ မှတ်ပုံတင် ကို ပျောက်မှာစိုးလို့ ရွှေလို အိမ်မှာ ဂရုတစိုက် သိမ်းထားပြီး ဓာတ်ပုံဆိုင်က လုပ်ပေးတဲ့ အစစ်နဲ့ တသွေမတိမ်းတူတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကိုပဲ ခရီးသွားရင် ယူသွားနေရတာပါ။ ရန်ကုန် မှာ အဲ့လို မှတ်ပုံတင် အစစ်ရှိပြီးသားလူတွေကို အတုလုပ်ပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်ဆိုရင် နီးစပ်တဲ့သူတွေ၊ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာခြားတွေအကြားမှာ နာမည်ကြီးပါ။
ဆိုတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစား မှုက တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာ နဲ့ နေရာတိုင်း၊ စနစ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ အမြစ်တွဲနေတဲ့ ပြဿနာ အဖြစ်သာ ရှုမြင်ပြီး အကျင့်ပျက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မှန်ကန် မြန်ဆန်ပြီး ဥပဒေ အတိုင်း စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ပေးရေး တို့ကို အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ နဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှတ် လွှတ်တော် အမတ်တွေ ကို တောင်းဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ အဆမတန် ထူထပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးတွေနဲ့ ပထဝီအနေအထားအရ နယ်နမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံအဖို့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို အမျိုးသား လုံခြုံရေး ပြဿနာ အမြင် လို့ မြင်နေကြသူတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှု နဲ့ သဘောကို နားလည် လက်ခံပါတယ်။ လူဦးရေးတိုးပွားနှုန်းလည်း မြန်တဲ့ လူမျိုးကွဲ/ဘာသာခြား တွေဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို အမျိုးသားရေး / လူမျိုး / ဘာသာ သာသနာ စတဲ့ ရှုထောင့်က ကြည့်ချင်သူများလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါ။
ဒါပေမယ့် အားလုံး (အဲ့လိုမြင်သူ/မမြင်သူ) နားလည် လက်ခံထားရမှာက အဲဒီ ရှုထောင့် တခုထဲကနေ မြင်..၊ သုံးသပ်..၊ ကောက်ချက်ချ..၊ သဘောထုတ်ပြီး ဒီပြဿနာဟာ ဖြေရှင်းလို့ မရတာကိုပါ။ အလားတူ သဘောပဲ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်း တခုထဲနဲ့လည်း မြင်လို့..၊ ရှင်းလို့ မရတာလည်း အားလုံး လက်ခံရပါ့မယ်။ ဆိုတော့ ဒီ နှစ်ခု ကြားချ ရမှာပါ။ ကြားချရင် ဘယ်ကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင် စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ ချစ်လို့၊ မုန်းလို့၊ ကြောက်လို့၊ ဆန္ဒဂတိ၊ ဒေါသဂတိ၊ မောဟဂတိ၊ ဘယာဂတိ စတဲ့ အဂတိ လေးပါး နဲ့ ကင်းလွတ်ပြီး ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တရားမျှတမှုတခုတည်းဘက်ကသာ ရပ်တည်တဲ့ တရားဥပဒေ အတိုင်း ဖြစ်ရမှာပေါ့ ဆိုတာကို အခြေခံ စဉ်းစားမှသာ ပြဿနာကို အလုံးစုံ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဥပဒေ အတိုင်းပဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုခဲ့တော့ လက်ရှိ တည်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ရဲ့ ဖြစ်ပေါ် လာပုံ နဲ့ သူရဲ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုကို ပထမဦးဆုံး ဆန်းစစ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဒီသဘောဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ က မြန်မာ/နိုင်ငံခြားသား ဥပဒေ ပညာရှင်တွေလည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ပြောတိုင်း ထောက်ပြလေ့ရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။
ဌာနေတိုင်းရင်းသား သဘော အလိုအလျောက် နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ပြုမှုကို ဒေါက်တာအေးကျော် က (၁၈) ရာစုခေတ် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာ ထုတ်ပြန်ဖူးခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း မှတ်တမ်းကို အခြေခံဖို့ ပထမ အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကို ဒေါက်တာ မောင်မောင်က တအားစောလွန်းတယ်လို့ မြင်လို့ (၁၉) ရာစု ဗြိတိသျှ စ အဝင် ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကို အခြေခံပြီး ဌာနေတိုင်းရင်းသား အဖြစ် အလိုအလျောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခွင့်ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဆိုတဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ ပညာ၊ ဥာဏ် ကို စာရေးသူအနေနဲ့ အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ သူတိုရဲ့ သမာဓိ ကို လည်း နောက်ခံ အခြေအနေ၊ အနေအထားတွေကြောင့် ထောက်ပြချင်ရင် ထောက်ပြလို့ရပေမယ့် ခုအချိန်မှာ မထောက်ပြလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို ရှေးရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက လူမျိုးပေါင်းစုံ မှီတင်းနေထိုင်နေလာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည် တပြည်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကို နှစ်ယောက်တပိုင်းနဲ့ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ခဲ့တဲ့ ပုံစံ၊ ဖြစ်စဉ်၊ သဘောကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ လိုတယ်..၊ ပြန်လည်စီစစ်ဖို့ လိုတယ်.. လို့ ယူဆပါတယ်။
(၁၉၈၂) နိုင်ငံသားဥပဒေ နဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပါ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် သဘောကို ဥပဒေ သဘော၊ ဥပဒေပညာ ရှုထောင့် က သုံးသပ်ရင်လည်း လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကတည်းက ပြဋ္ဌာန်း သုံးစွဲလာခဲ့တဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပါ နိုင်ငံသား ဥပဒေတွေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဥပဒေ စည်းမျဉ်းအရ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ အာဏာပိုင် တသဘောတည်း အလိုကျ အမျိုးမျိုး လိုသလို ပုံဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်နေ မှု၊ နိုင်ငံသားပြုခံပြီး နိုင်ငံ သားဖြစ်စေတဲ့ ဥပဒေ ရဲ့ အားနည်းပြီး လိုသလို စီမံ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရနေမှု၊ ဗမာနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာမှာ တရားဝင် ပါဝင် လက်မှတ်ထိုး သဘောတူညီထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ကလေး အခွင့်အရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ လက်ရှိတည်ဆဲ နိုင်ငံသား ဥပဒေ နဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပါ အချက်အလက်တွေဟာ သဟဇတ မဖြစ် (Conflict) ဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
စာရေးသူ တဦးတည်း အမြင်အရ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှု၊ အားနည်းမှု၊ နိုင်ငံတကာ မှာ သဘောတူထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်း ကတိကဝတ်တွေနဲ့ လက်ရှိပြည်တွင်း ဥပဒေတွေ ကိုက်ညီမှု မရှိမှု ဖြစ်နေတာတွကို လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က အလေးအနက်ထား စဉ်းစားသင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်မှုတွေကို အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအတွင်းမှာ လုပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ခုလောလောဆယ်အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ ရခိုင်/မြန်မာ သမိုင်း ပညာရှင်များ လည်း သဘောတူ ထားတဲ့ ကိုလိုနီစဖြစ်မှု (၁၈၂၄-၂၆ CE) နဲ့ အတူ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) အများအပြား လာရောက် အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သဘော နဲ့ တည်ဆဲ (၁၉၈၂) နိုင်ငံသားဥပဒေ ရဲ့ နိုင်ငံသားပြုခွင့် အရ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ မေယု နယ်ခြား ဒေသမှာ အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့၊ တနည်းအားဖြင့် ၁၉၄၈ မတိုင်မီ (ကိုလိုနီခေတ်အတွင်း) ဗမာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကို ဝင်ရောက် အခြေချ လာခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ရဲ့ လက်ရှိ မျိုးဆက်တွေကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးခြင်းဖြင့် ဒီရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို အလျင်အမြန် ဖြေရှင်း သင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဆိုရရင် ၁၉၉၆ ခုနှစ် မေလ (၁၊ ၂၂၊ ၃၀) ရက် ထုတ် စစ်အစိုးရ အင်္ဂလိပ် သတင်းစာ “The New Light of Myanmar” များပါ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန် ချက် များ အရ ၁၉၉၂ ခုနှစ် က နေ ၁၉၉၆ မေလ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ပေါင်း (၁၉၈,၄၃၅) ယောက်ကို ကရင်ချောင်း ပြန် လည် လက်ခံရေး စခန်းအပါအဝင် အခြား ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းပေါင်းစုံ ကနေ ပြန်လည် လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
အခု မေယုနယ်ခြားဒေသမှာ နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံသား ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အခြား ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရခိုင် အပါအဝင် လူမျိုးစု တွေ အတူယှဉ်တွဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့၊ အနာဂတ်မှာ အတူနေ လူမျိုးကွဲ အုပ်စုချင်း ပဋိပက္ခ တွေ နည်းဖို့က ပညာရေး၊ လူမှုရေး နဲ့ စီးပွားရေး တပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးမှ ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံတကာ အကူအညီ၊ မိတ်ဆွေ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေက ထောက်ပံ့ မှုတွေ နဲ့အတူ လူမျိုး/ဘာသာ မခွဲ အစိုးရ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက သမာသမတ်ကျကျ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောကို ခု လက်ရှိ သမ္မတလည်း သဘောတူတယ်လို့ သူရဲ့ ဗွီအိုအေ အင်တာဗျူး အရ ယူဆရပါတယ်။
အရင်ခေတ်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပညာသင်ကြားခွင့်၊ ကျန်းမားရေး စောင့်ရှောက် ခံယူခွင့်၊ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်၊ ကလေးမီးဖွားခွင့်၊ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ် စတဲ့ အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေ၊ ပြည်မက ရာဇဝတ်သားဟောင်းတွေကို အဲ့ဒေသတွေမှာ စံပြကျေးရွာဆိုပြီး အတင်း တည်ထောင်၊ ထောက်ပံ့မှုမျိုးစုံ ပုံအောပေး၊ အစိုးရ အရာရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ချောင်းပေါက် မတတ်သွားပြီး မညီမျှတဲ့ သဘောထားတွေနဲ့ ရပ်ရွာဒေသ တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားအောင် လုပ်မှုတွေဟာ ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ကို မီးဆက်တောက်စေတဲ့ သဘောတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လက်ခံသဘောပေါက်ပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်၊ သိက္ခာ ရှိရှိ၊ ဒီမိုကရေစီ သဘောအရ လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝ နဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကို လူမျိုး/ဘာသာ ထည့်မစဉ်းစားဘဲ နှစ်ဘက် စလုံး မျှမျှတတ တပြေးညီ ဆောင်ရွက်မှ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒေသ နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖန်တီးလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ လူမျိုးအုပ်စုနှစ်ခု သံသယတွေနည်း၊ အမုန်းတွေ လျော့၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးပွားလာစေဖို့က လည်း နှစ်ဘက် လူမှုရေး အသင်းတွေ (ဥပမာ - ရခိုင် အသင်း၊ ဗမာ-မွတ်ဆလင် အစည်းအရုံး) နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ (ဥပမာ - RNDP) တွေက နှစ်ဘက်အုပ်စု ယဉ်ကျေးမှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ လူထုပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်လို့ စာရေးသူအနေနဲ့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို အဖြစ်အပျက်ဟာ စိတ်ခံစားမှု တခုတည်းအရ လူသိရှင်ကြား ပြန်လည် မှတ်ချက်ပြုလို့ ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဦးနှောက်မှာ ရှိတဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ် ဝေဖန် မှတ်ချက်ပြုမှ ဖြစ်မှာမို့ပါ။ အကြောင်းက ကမ္ဘာ မှာ နိုင်ငံတကာက လူမျိုးစု တွေ နဲ့ ရာဇဝတ်မှု ဆက်နွယ်မှုကို သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနလုပ် စာရင်း တွေ ထုတ်ပြန်လေ့လာကြပေမယ့် လူမျိုး နဲ့ ရာဇဝတ်မှု ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို သက်သေ သာဓက ကောင်းကောင်းပြစရာ မရှိတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုး တမျိုးကတော့ဖြင့် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နိုင်ခြေ ပိုရှိတယ်လို့ တသမတ်တည်း ဧကံ ကောက်ချက်စွဲလို့မရလို့ပါ။
ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူ လူတဦးချင်း ကို လေ့လာရာမှာလည်း ဒီလူဟာ မျိုးရိုးဗီဇ ကြောင့် ဒီလိုရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တာပါလို့ မုချ ပြောလို့ မရဘဲ သူ့ရဲ့ ပညာ အခြေခံ၊ ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့မှု မိသားစု နောက်ခံ အခြေအနေ နဲ့ နေထိုင် ကြီးပြင်း ခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင် စတာတွေက ပို အဓိက ကျ တာ တွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေ လိုက်မှာလည်း ဒီလို တသဘောတည်းဖြစ်တဲ့ အဲဒီ လူမျိုးစု နေထိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ ပညာရည် မြင့်မားမှု၊ လူမှု စီးပွား အခြေအနေတွေကသာ ရာဇဝတ်ဖြစ်နှုန်းနဲ့ ပိုဆက်စပ် နှီးနွယ် အကျိုး၊ အကြောင်းရှာ လို့ ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ အထက်ပါ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်စေအုံးတော့ ဒါဟာ သူတို့ လူမျိုးအလိုက် သဘောလို့ ယူဆလို့ မရဘဲ လူတဦးချင်းသဘောနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အပါအဝင် အစစ အရာရာ အားနည်းချက်တွေကြောင်လို့သာ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရင် တနှစ်က ကျောက်ပန်းတောင်း မှာ ဂျပန် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အမျိုးသမီးငယ် ကို မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ခဲ့တဲ့ (ကို) မင်းသိုက် ဟာ မြန်မာ လူမျိုး နဲ့ ဗမာနိုင်ငံ တခုလုံးကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့ သဘောပါပဲ။ စာရေးသူ တဦးတည်း အမြင် နဲ့ သက်သေ အထောက်အထား ထပ်ပြရရင်လည်း ဗမာပြည် က နှစ်စဉ် ရာဇဝတ်ဖြစ်ပွားတဲ့ နှုန်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ နဲ့ မျိုးနွယ် တူ (သို့) ဘာသာတူ အခြား အိမ်နီးချင်း နဲ့ ကမ္ဘာ့ အနှံ့အပြား နိုင်ငံတွေက ရာဇဝတ် ဖြစ်ပွား နှုန်းတွေကိုသာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အဲဒီလို လေ့လာကြည့်ရင် နိုင်ငံတွေရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ပညာအရည်အချင်း မြင့်မားမှု၊ လူမှု၊ စီးပွား အချက်တွေ ကြောင့်သာ ရာဇဝတ်ဖြစ်နှုန်း အနည်း/အများ က သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နိုင်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက် ထောက်ပြ လိုတာကတော့ ရာဇဝတ်မှု သဘောတွေမှာ လူမျိုး၊ မျိုးရိုး၊ ဗီဇ နဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်တဲ့ အမျိုးအစား သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခွဲခြားလို့ မရပေမယ့် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင် ကွဲပြားမှုကို အခြေခံ တဲ့ အစွဲတွေ၊ မုန်းတီးမူတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ အမုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု (Hate Crime) ကတော့ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် သတ်မှတ် ထားနိုင်ကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်/မြန်မာ သမိုင်း ပညာရှင် များလည်း လက်ခံနိုင်တဲ့ သဘောအရဆိုရရင် ရခိုင်ဒေသမှ မွတ်ဆလင် တွေ ကို လေးမျိုး ခွဲနိုင်ပါတယ်။
(၂) ရခိုင် ဘုရင် မင်းစောမွန် (King Narameikhla) (၁၄၀၄-၁၄၃၄ CE) က မြန်မာ (ဗမာ) ဘုရင်လက်အောင်ကျရောက်နေတဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံကို ဘင်ဂေါလ် နယ် ဘင်္ဂါလီ ဆူလတန် ဘုရင် (Sultanate of Bengal) အကူအညီ နဲ့ (၁၄၃၀ CE) မှာ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ပြီး ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော် မြောက်ဦး မင်းဆက် (၁၄၃၀-၁၇၈၄ CE) ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို ပြန်လည် မထူထောင်နိုင်သေးခင် (၂၄) နှစ်ကြာ ဘင်ဂေါလ် နယ် ဆူလတန် ဘုရင် ဆီမှာ အဝေးရောက် ခိုလှုံ (Exile) နေခဲ့ရပါတယ်။ ဆူလတန် အကူအညီ နဲ့ ရခိုင်နန်းဆက် ပြန်ထူထောင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်နိုင်ငံဟာ ဘင်ဂေါလ် နယ် ဆူလတန် ဘုရင် လက်အောင်ခံ မိတ်ဆွေ ပဏ္ဍာ နိုင်ငံ အဖြစ်ဆက်တည်ရှိနေခဲ့ရတဲ့အတွက် ရခိုင်ဘုရင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုးကွယ်ပေမယ့် အစ္စလာမ်မစ် ဘွဲ့ တွေခံယူကြပြီး ဘင်ဂေါလ် နယ်သုံး အစ္စလာမ်မစ် ဒင်္ဂါးတွေကိုလည်း ငွေကြေးအနေနဲ့ တရားဝင် သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို အနေအထားဟာ ဘင်ဂေါလ် နယ် ဆူလတန် သြဇာခံ လက်အောင်က လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့ (၁၅၃၁ CE) အထိလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲ့နောက်ပိုင်းလည်း အစဉ်အလာအရ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ရခိုင်ဘုရင်တွေဟာ အစ္စလာမ်မစ် ဘွဲ့ နာမည် ခံယူတာတွေ ဆက်ရှိနေပါသေးတယ်။
မြောက်ဦးခေတ်မှာ မင်းစောမွန် ရခိုင်ကို ပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစလို့ အတူပါလာခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဘုရင့်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အစဉ်အဆက် နေရာကောင်း အများအပြား ရလာခဲ့ကြပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို အခု လူအများ ပြောကြရင် မယား အများကြီး ယူတဲ့ ကိစ္စ ပါလာတတ်တဲ့ အတွက် ဒီခေါင်းစဉ်ကို ထည့်ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Monogamy နဲ့ သူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Polygamy သဘောမှာ ဆွေးနွေး စရာ အချက်တွေ အများကြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် သီးသန့်ဆောင်းပါး အနေနဲ့ ရေးမှသာ ပြည့်စုံ နိုင်မှာ ပါ။ အောက်မှာ တင်ပြ ထားတာက အကျဉ်းချုံးပါ။
တလင်တမယားစနစ် မဟုတ်ကြတဲ့ (Polygamy) သဘောဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ မွတ်ဆလင်တွေ ချည်းပဲ အစဉ်အဆက် ကျင့်သုံးခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့ အဝှမ်းက ရှေးဟောင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း (လူမျိုး/ဘာသာစုံ) အတော်တော်များများမှာ Polygamy ရဲ့ ပုံစံနှစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Polygyny (မယားပြိုင်) နဲ့ Polyandry (လင်ပြိုင်) သဘော ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာက လက်ရှိ ခေတ်သစ်မှာပါ ရှေးရိုးစွဲတဲ့ အလေ့အထတွေကို ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်နေတော့ Polygamy ထဲက Polygyny (မယားပြိုင်) ကို လူမှု ထုံးတမ်း အရ နဲ့ တရားဥပဒေ အရ အများစု လက်ခံထားကြပါတယ်။
လက်ခံခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်တိုင်း လိုက်ကျင့်သုံးတာ မဟုတ်ပါ။ ယေဘုယျ သဘောအနေနဲ့ မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာမှာ အိမ်ထောင်ပြုမှုတွေရဲ့ (၁-၃ %) ရာခိုင်နှုန်း မျှကသာ မယားပြိုင်ယူထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး (Polygamous Marriages) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် အများစု ရှိတဲ့ တူရကီ၊ တူနီးရှား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနား နိုင်ငံတွေမှာ ဆို တရားဥပဒေ အရ တလင်တမယား စနစ် သာ ကျင့်သုံးပြီး Polygamy ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဘာသာရေး ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ လွှမ်းမိုးမှုကင်းတဲ့ ဆီကူလာ အာရပ် တိုင်းပြည် တခု ဖြစ်တဲ့ လယ်ဘနွန် ဆိုလည်း အလားတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ နဲ့ Polygamy ကို တွဲစဉ်းစားဖို့ထက် တိုင်းပြည်မှာ အားလုံးတပြေးညီ ဖြစ်အောင်၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရအောင် Polygyny (မယားပြိုင်) တရားဥပဒေ အရ ယူထားနိုင်မှု ကို ပြင်ဖို့ ဥပဒေပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေကို ထောက်ပြပြီး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ တောင်းဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်နိုင်ရင် တပါတည်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရား ဥပဒေ အတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်ကြံ ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Polygyny (မယားပြိုင်) ယူထားနိုင်မှုက ပပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလို ဥပဒေ သဘောနဲ့ တားမြစ်ထားတာပါပဲ။ တပါတည်း မိမိ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ၊ အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝန်းမှာ တလင်တမယား စနစ် (Monogamy) ရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေ ကို ပညာပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်တဲ့ ကိစ္စတခုဖြစ်တဲ့ အသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ် လက်ထက်မှု (Child Marriage) ဟာလည်း Polygamy လိုပဲ ရှေးဟောင်းခေတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး နဲ့ လက်ရှိခေတ် ရှေးရိုးစွဲ လူ့အသိုင်းအဝန်းတွေမှာ ရှင်သန်နေတဲ့ ဓလေ့ တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်း မှာ လက်ထပ်နိုင်တဲ့ အသက် ကန့်သတ်ချက် တရားဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီး ကန့်သတ် ထားပါတယ်။
ဒီလို တရားဝင် အိမ်ထောင်ပြုနိုင်တဲ့ အသက် (Legal Marriage Age) နဲ့ လိင် ဆက်ဆံ နိုင်တဲ့ အသက် (Legal Sex Age) ကို ဗမာပြည်မှာလည်း သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် စိုးရိမ်စရာ မလိုတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်..။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘာသာရေး နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆအရ ခေတ်မီ ပဋိသန္ဓေ တားဆီးရေး မှာ အားနည်းကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော် အရ စီရင် ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာ ပဋိသန္ဓေတားခြင်း (Contraception) ဟာ အပြစ် (Sin) ဖြစ်တယ်လို့ တိတိကျကျ ဆိုထားတာမရှိပါ။
အခြားဘာသာ အယူဝါဒတွေမှာလည်း ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ ဘာသာတရား အဆုံးအမ ကို အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူ ကျင့်သုံးပုံတွေမှာ ရှေးရိုးစွဲ နဲ့ ခေတ်မီ သူတွေအကြား ဝိဝါဒကွဲနေတဲ့ သဘောသာဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျ သဘော အနေနဲ့ ကမ္ဘာ အနှံ့က မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ အများစု အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတဲ့ အစ္စလာမ် အယူအဆ ပညာရှင်ကြီးတွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း သဘောထားထုတ်ဖော် လမ်းညွှန်ချက်အရ ခေတ်မီ ပဋိသန္ဓေတားခြင်း နည်းလမ်းများကို အချက် (၃) ချက် ကန့်သတ်ပြီး ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ကန့်သတ်ချက်တွေဟာလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့သဘောတွေဖြစ်တဲ့ (၁) ပဋိသန္ဓေတားခြင်းဟာ လင်မယား နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ သဘော ဆန္ဒ ဖြစ်ရမယ်။ (၂) ပဋိသန္ဓေတားတဲ့ နည်းလမ်းကြောင့် တသက်လုံး မျိုးမပွားနိုင် မြုံသွာတာမျိုး မဖြစ်စေရဘူး။ (၃) ပဋိသန္ဓေ တားဆီးခြင်းကြောင့် လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသက် အန္တရာယ် ထိ ခိုက်မှု မရှိစေရဘူး၊.. ဆိုတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ခေတ် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် တရားမဝင် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို တရားဝင် အိမ်ထောင်ပြုခွင့် မပေးဘဲ ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းဟာ လူသားရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ရာ ရောက်ပြီး လူသားဖြစ်တည်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရာဇဝတ်မှုပုဒ်မ အကြီးကြီးနဲ့ နာမည်ဆိုးတာသာ အဖတ်တင်ခဲ့ပြီး တကယ် သူတို့ရဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သလားဆိုတာလည်း ထိရောက်အောင် မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့ နေနေတဲ့ ဒေသ ဗမာပြည်ထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်၊ မီးဖွားခွင့် မရတော့ ခိုးပြီး လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့အချိန် အာဏာပိုင်တွေသိတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက် ထွက်ပြေး၊ ဟိုက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ဆက်နေထိုင်၊ ကလေးမွေးရင်းနဲ့ လူဦးရေ က များလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ မိမိနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် တချိန်မဟုတ် တချိန် ပြန်လက်ခံရမှာသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး မိမိ နိုင်ငံမှာပဲ လူဦးရေးမတန်တဆ တိုးပွားလာတာသာ အဖတ်တင်ကျန်ရစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူမျိုး/ဘာသာ မတူသူ အုပ်စုတွေ အကြား တိုးပွားနေတဲ့ သံသယ တွေ အမုန်းတွေကို ပပျောက်ဖို့က လက်ရှိ ဗမာပြည်မှာနေထိုင်နေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင် များရဲ့ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပုံ နဲ့ ခံယူချက် မှန်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ရှေးဘိုးဘွားအဆက်က ဘယ်လူမျိုးက ဆင်းသက်လာခဲ့ပစေ လက်ရှိ ဗမာနိုင်ငံသား အနေနဲ့ နေထိုင်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်များ (ရိုဟင်ဂျာ၊ အခြား ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်တဲ့ အိန္ဒိယ၊ အာဖဂန်၊ အာရပ်၊ ပါရှန် အနွယ်အားလုံး) ဟာ နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် ကို မိမိကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး မှာ တိုးပွားရှင်သန်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီ အမျိုးသားရေးဟာ အမျိုး/ဘာသာ/သာသနာ ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ အပေါ်မှာ အခြေမခံဘဲ ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံး၊ လူမျိုး/ဘာသာ အားလုံး၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံး သဘောဆောင်တဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည် ချစ်စိတ် အပေါ် အခြေခံ မြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို မြင်နိုင်ဖို့၊ ဒီလို အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမျိုးသားရေး၊ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံ/တိုင်းပြည် ချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံ/တိုင်းပြည်ချစ်ရေး သဘောကို မြန်မာ အပါအဝင် အခြား တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ ဗမာနိုင်ငံသား၊ ဗမာနိုင်ငံဖွား တရုတ်တွေမှာလည်း မြင်နိုင်၊ ခံယူကျင့်ကြံနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်တခုက ဗမာ-မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့ အခြား မွတ်ဆလင် မဟုတ်သူတွေကြား မှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အထင်မြင်လွဲမှား သံသယ ရှိနေမှုတွေ၊ မသိနားမလည်လို့ အကြမ်းဖက်ဝါဒ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အစ္စလာမ် ဝါဒ ကို ရောထွေး အထင်မှား၊ အမြင်မှားဖြစ်ကာ အစ္စလာမ် အကြောက် ရောဂါ (Islamophobia) ဝင်နေသူများကို အပြစ်လို့ တထစ်ချ မသတ်မှတ်၊ မမြင်ဘဲ အစ္စလာမ် ဘာသာ နဲ့ အကြမ်းဖက်မှု မပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြတဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အခြေခံ ဗဟုသုတ၊ အမြင် ဖလှယ်ပွဲတွေ၊ ကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
နောက်တချက်က အစ္စလာမ် ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ ရှေးရိုးစွဲ လူတစု နဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တချို့က ပြင်းထန်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အယူဝါဒ တွေ မသင်ကြားနိုင်စေဖို့၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုးပွားစေတဲ့ သဘောတွေ မဟောပြောနိုင်စေဖို့ကိုလည်း ဗမာ-မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ က ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်းတွေကို လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ခေတ်မီ လွတ်လပ်၊ မျှတ၊ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေနဲ့ အညီ စစ်မှန်တဲ့ ဘာသာရေး စာပေ သက်သက် သင်ကြားနေတာသာဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ် သာသနာ ကို အဓမ္မ သဘောနဲ့ ဖြန့်ဖြူးဖို့ (Islamisation) သင်ကြားပေနေတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ရှေးရိုးစွဲ ပြင်းထန်တဲ့ သဘောတွေ၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒတရားတွေ လှုံ့ဆော်နေတာ မဟုတ်ကြောင်း သက်သက်ပြုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း စာရေးသူ ထောက်ပြသလို သက်ဆိုင်ရာ မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝန်း (Muslim Community) နဲ့ အစိုးရ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘာသာစွဲပြင်းထန်မှုတွေနည်းအောင်၊ ဘာသာရေး အမည်ခံ အစွန်းရောက်၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်ရောက် စိမ့်ဝင် လှုပ်ရှားခွင့်မရအောင် ကာကွယ်တာဆီး နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင် စာရေးသူတို့ရဲ့ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အနေအထား အချိန်ကနေ အလင်းကို ခုမှ စ ဝင်လာတာနဲ့ သဘောတရားချင်း တူနေပါတယ်။
အလင်းကို ဝင်ခါစ အချိန်မှာ မျက်စိတွေ ကျိန်းနိုင်ပါတယ်။ အလင်းဒဏ်က လူအများစုရဲ့ အမြင်တွေကို စူးရှ ထိခိုက် စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရာရာဟာ အရိုးစွဲ နေသားတကျ ဖြစ်နေတဲ့ သမာရိုးကျ စိတ်၊ စဉ်းစားပုံ၊ အတွေးအခေါ် တွေ နဲ့ အံမဝင်ခွင် မကျ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကို မလိုလားအပ်တဲ့ သဘော အနေနဲ့ မရှုမြင်ဘဲ အကျိုးသင့်၊ အကြောင်းသင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြီး လက်ခံသင့်တဲ့ အရာတွေကို လိုက်လျောညီထွေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲချင်တဲ့ စိတ်နဲ့အတူ လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှ ပါတယ်” ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း နားလည်လက်ခံနိုင်ပေ မယ့် ခေတ်သစ် ကမ္ဘာရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနေတွေနဲ့ အလိုက်သင့် ပြုပြင်ပြောင်း လဲ နိုင်စွမ်း မရှိဘဲ ကြိုတင် ကောက်ချက်၊ အစွဲ၊ မယုံကြည်မှု၊ သံသယ၊ ရန်ငြိုး၊ အမုန်း၊ စစ်ပွဲ တွေ နဲ့သာ ဒီလို အခြေအနေသစ်နဲ့ သဘောတွေကို တုန့်ပြန်ခဲ့ကြရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ပျောက်ဆုံးမှုက ပိုလို့ အရေးကြီးပါတယ် လို့ပဲ ဆိုပါရစေ ခင်ဗျာ။
1. ငြိမ်းချမ်းအေး၊ “ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆင်ခြင်စရာ”http://moemaka.com/?p=24166
2. အောင်ထူး (ရှေ့နေ)၊ “ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ”၊ ခေတ်မောင်း စာစောင်၊ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၃)၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
3.့ ဘီဘီစီ မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးဆွေးနွေးခန်း၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
4. The Universal Declaration of Human Rights: http://www.un.org/en/documents/udhr/
5. International Covenant on Civil and Political Rights: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
6. International Covenant on the Rights of the Child: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
7. Rohingya refugees return to Burma: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/221775.stm
8. မောင်ဆန္ဒ(လယ်ဝေး)၊ ကမန်မျိုးနွယ်စု သမိုင်း၊ နိုင်ငံဂုဏ်ရည်စာပေတိုက်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ။
• Dr. Francis Buchanan-Hamilton, M.D., “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire”, Asiatic Researches5(1799), Page 219-240. Republished: University of London (UL), School of Oriental and African Studies (SOAS) Bulletin of Burma Research, Vol. 1, No., 1, Spring 2003.
• Leider, Jacques P: "Interview: History Behind Arakan State Conflict", by The Irrawaddy, July 9, 2012.
• Dr. Aye Kyaw: “An Historian Looks at Rohingya”, by The Irrawaddy, October 7, 2009.
• Yegar, Moshe, “Between integration and secession: The Muslim communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma / Myanmar”, Lanham, MD: Lexington Books, p. 23-24, 2002, ISBN: 0739103563.
• Dr. Aye Chan, The Development ofaMuslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), University of London (UL), School of Oriental and African Studies (SOAS) Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No., 2, Autumn 2005.
• The New Encyclopedia of Islam (2002), AltaMira Press, ISBN 0-7591-0189-2
• Burma Press Summary, 1996, May, From the Rangoon “The New Light of Myanmar”, Compiled for the Burma Studies Group by Hugh C. MacDougall, Published by the Center for East Asian and Pacific Studdies, University of Illinois.
• Burma’ Citizenship Law, 1982: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f71b.html
• မြန်မာ့စွဲစုံကျမ်း၊ အတွဲ (၉)၊ အပိုင်း (က)၊ စာပေဗိမာန်၊ ၁၉၆၄၊ ပဌမအကြိမ်၊ စာမျက်နှာ (၈၉)။
(ဘလော့များ ၊ ဖိုရမ်များတွင် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုပါက အစ အဆုံး ဆောင်းပါး တပုဒ်လုံး အပိုင်း (၁+၂ + ၃) ဖော်ပြနိုင်မှသာ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် တချို့တည်းကွက် ဖော်ပြပါက စာရေးသူ ရဲ့ ဆိုလိုရင်း တင်ပြချက်ကို စာဖတ်သူ ပုံဖော်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ခေါင်းစဉ် တချို့တည်းကွက် ဖော်ပြခြင်းကို လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။)
Posted in: သူ့အတွေး သူ့အမြင်
ဆောင်းပါးက ရှည်လွန်းပြီး လိုရင်းမရောက်ပါ။
လိုတိုရှင်း စာဖတ်သူကို ဘာဆိုလိုသည်ကို ထိထိမိမိပေးနိုင်အောင် ရေးစေလိုပါသည်။
ကျမ်းပြုနေခြင်း မဟုတ်ဆိုသည်ကို သတိရှိစေလိုပါသည်။
What are you talking about? This book never mentioned these bangali are burmese citizen, this book merely mentioned bangali were staying there. NEVER EVER said that bangali were burmese citizen nor burmese ethnic group. Don't mislead the unsuspected readers and DON'T give false hope to those bangali.
ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဘဲပြောပြော ဘယ်လိုအမြင်ဘဲရှိရှိ ၊ အဓိက ကတော့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် ၊ အမိနိုင်ငံကို ကာကွယ် ရမဲ့တာဝန် ရှိတယ်လေ ၊
ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဆိုတာ ၊ ဒုတိယ အဆင့်ပါ၊၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီး ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း လိုဖြစ်ဖို.တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုရင်တော.၊
ဘယ်တော.မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ချင်ရင် အဲဒီမှာပြောင်းနေလို.ပဲ အကြံပြုပါရစေ၊
ဒီရိုဟင်ဂျာတွေက ပြင်ပမူဆလင်နိုင်ငံတွေ ထောက်ပံ့မူယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခွဲထုတ်ဖို.ကြိုးစားနေကြတာကို၊ နိုင်ငံသားတိုင်း ကာကွယ်ရမယ်.တာဝန်ရှိပါတယ်၊
ဤစာကို ရေးသားသူသည် ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ တစ်ယောက်အဖြစ် ချီးကျူးလေးစားပါသည်။ သမာသမတ်လည်း ကျလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသဖြင့် မေးခွန်းအချို့ မေးလိုပါသည်။ ၁။ ယခုအချိန်မှစ၍ လူကြီးမင်းအား ဘူးသီးတောင် သို့မဟုတ် မောင်းတောမြို့သ်ု့ သွားရောက်နေထိုင်စေပါက နေနိုင်မည် သို့မဟုတ် မနေနိုင်မည်။ ။ ၂။ ယနေ့ ကမ္တာတလွှားဖြစ်ပွားနေသော အစွန်းရောက် အစ္စလမ် အချို့၏ အကြမ်းဖက်မှုများကို မည်သို့ဖြေရှင်းသင့်သည် ။ ၃။ နီုင်ငံတစ်ခု၏ နိုင်ငံသားလူများစု၏ စိတ်ခံစားမှုဖြင့် ချမှတ်ထားသော ဥပဒေသများကို လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်ဖြင့် ကြည့်သင့် သည် သို့မဟုတ် မကြည့်သင့်သည်။လေးစားစွာဖြင့်
ဘင်ဂလား အလုပ်သမားလူသစ် တယောက် စင်ကာပူ လာဖို့ စင်းဒေါ်လာ ခြောက်ထောင် လောက်ကုန်ပါတယ်
ရွှေတွေကအလွန်ဆုံး လေးထောင် လောက်ပဲ ဘယ်ဘကုန်းအစိုးရမှ စီစဉ်မပေးပါ ကျတော့အလုပ်မှာ ဘတွေချည်းပဲ
မလေး ကဘင်ဂလား ကိုတရားဝင်ပါမစ်မပေးတော့ပါကြာပါပီ အရှေအလယ်ပိုင်းကလစာမကောင်းပါ ဂျပန် ကိုရိယား
မှာမရှိပါ .စာရေးသူက ဘင်းဂလားမြန်မာပြည်မလာဘူးဆိုလို့ လှေစီးတဲ.သူတွေလည်းဘင်းဂလားကပဲ အဖမ်းခံရယင်
မြန်မာမူစလင်များ ကျေးဇူးမကန်းကျပါနဲ ၊ ရိုဟင်ဂျာဟာကို့လူမျိုးကို့တိုင်းရင်းသားမဟုတ် တာကို ကမ္ဘာကသိအောင်ထပြောကြပါ ၊ မဟုတ်ရင်တော့ နိုင်ငံကို ကျေးဇူးကန်းတာပဲလို့သတ်မှတ်ရမှာပဲ...
စာရေးသူအနေနဲ့ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့ စရိုက်နှင့် ဗီဇကို အဲ့ဒီ့ဒေသမှာ သွားရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ဗဟုသုတကို ပြန်လည် ဖြန့် ဝေပါက ပိုပြီးလက်တွေ့ ကျသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့ စာသင်ပေးသော ဆရာပါ သတ်သည့် စရိုက်ကို အသက်နှင့်ရင်း၍ ရရှိလိုက်ပါက မူရင်းနေထိုင်သူ ရခိုင်ပြည်သူများကို စာနာလာပါလိမ့်မည်။
I waiting and read his ( Nyain Chan Aye) post. I know he is not stand on side of Myanmar Country and Myanmar people. Since last "Sait Martin" Island issue.
Nyein Chan Aye,
I haveaquestion to you. Are youaBingali oraMuslim? Because you cover the truth of the real situation in Rakhine. I think if you are pure Myanmar citizen and alsoapatriot, you will not write this kind of article.
လေးစားပါသည် Anonymous ခင်ဗျား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်တွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ပေးရန်အလိုမရှိပါ။ စာရေးသူပြောသလိုပဲ အလယ်အလတ်ကျကျပဲတွေးတွေး ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွေးတွေး သည်နိုင်ငံမှာပေးနေရန် အလိုမရှိပါ။ ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတော့စစ်စစ်ပါပဲ။
honey said... :
မဆုံးဖြတ်လို ဆိုတာတွေမကြာခဏတွေ့ ရပြီး ရိုဟင်ဂျာ နိုင်ငံသားဖြစ်စေလိုတဲ့အာဘော်ကိုရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ နေရပါတယ်။ဒါဟာခြုံငုံသုံးသတ်တာပါ။အားလုံးပြန်အစစွဲရင်ရှည်ကုန်မှာစိုးလို့ပြန်မဖော်ပြတော့ပါ။ ဖတ်ကြတဲ့သူတွေသတိပြုမိလောက်မယ်ထင်ရဲ့။
အထက်မှာမိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှတ်ချက်ပေးသလိုပဲ ဗဟုသုတပြည့်စုံမှုကိုချီးကျူးပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက် အပြင်နိုင်ငံသားမဖြစ်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေဒီထဲမှာသိသာထင်ရှားစွာဖော်ပြမထားခြင်းက သမာသမတ်ကျတဲ့ဆောင်းပါးထက် အာဘော်ကိုအလေးပေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်
ဖော်ပြရာမှာ ယိမ်းယိုင်မှုရှိကြောင်း နဲ့လက်မခံပါကြောင်းခင်ဗျာ ။